Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Izongezo zeMpilo yoBuchule: Ngoku uYeka ukuncipha kwengqondo?
Ngokwe-Coherent Market Insights, imakethi yezongezo zempilo yengqondo yehlabathi iqikelelwa ukuba iphendule kwi-14,639.5 yezigidigidi ngokwexabiso ekupheleni kuka-2028.
I-Ginkgo biloba kunye ne-coenzyme Q10 zombini ziyaziwa, nangona ziqulethe i-caffeine, enokuphazamisa ukusebenza kwengqondo. Ukusebenzisa ezi zongezo mihla le kunokunceda ukunqanda ukuphambana kwengqondo, ukuphucula isimo sengqondo kunye nenkumbulo. Zininzi izongezo ezahlukeneyo ezinokunceda ukuphucula ukusebenza kwengqondo. Ezinye zezona zidumileyo ziivithamini kunye neeminerali, eziluncedo kwingqondo. Abo baneengxaki zengqondo kufuneka bakuphephe ukuthatha i-vitamin E, eyi-antioxidant enamandla. Ngelixa ezi zongezo ziluncedo kwimpilo iyonke, azisebenzi ekunyangeni okanye ekuthinteleni isifo sengqondo esixhalabisayo.
1. Ukuxhaphaka okukhulayo kokuphazamiseka kwengqondo kulindeleke ukuba kuqhube ukukhula kwemarike yezongezo zempilo yobuchopho kwihlabathi ngexesha loqikelelo.
Ngokukhula kwabemi be-geriatric, ukuxhaphaka kwezigulo zengqondo ezahlukeneyo ezifana ne-Alzheimer's, ukudakumba, kunye nokuxhalaba kuye kwanda. Ngokutsho kwe-Alzheimer Association, ngo-2021, malunga ne-6.2 yezigidi zabantu base-US abaneminyaka engama-65 ubudala nangaphezulu baphila ne-Alzheimer's dementia. NgokweQonga lezoQoqosho leHlabathi (i-WEF), ngo-2019, malunga ne-275 yezigidi zabantu kwihlabathi liphela banengxaki yokukhathazeka, apho i-170 yezigidi ingabasetyhini ngelixa amadoda anengxaki kwi-105 yezigidi. Ngaphezu koko, ngokutsho kweAnxiety and Depression Association of America (ADAA), ukuphazamiseka kokuxhalaba sesona sigulo sengqondo sixhaphakileyo e-US, esichaphazela malunga nezigidi ezingama-40 zabantu abadala kweli lizwe. Izongezelelo zempilo yengqondo zinokunceda ekwaphuleni i-homocysteine, amanqanaba aphezulu adityaniswa nomngcipheko omkhulu we-dementia kunye nesifo se-Alzheimer.
2. Ukonyuka kolwazi phakathi kwabemi ngokubanzi malunga nokuba sempilweni kulindeleke ukuba kukhuthaze ukukhula kwemarike yezempilo yengqondo kwihlabathi liphela ngexesha loqikelelo.
Abemi ngokubanzi baye bazi ngakumbi malunga nezongezo zempilo yobuchopho kunye neenzuzo zabo. Abathengi bafuna ngenkuthalo iimveliso ezinjalo, ukuze bagcine impilo enempilo kwaye bathintele ukuvela kweengxaki ezahlukeneyo zengqondo. Ngokunyuka kwenani lemisebenzi yokwazisa eyenziwa ziinkampani eziphambili, imfuno yezongezo zempilo yobuchopho kulindeleke ukuba ikhule kwixesha elizayo. Ngaphezu koko, ukunyuka kwengeniso enokulahlwa kunye nokukhula ngokukhawuleza kokukhula kwabantu basezidolophini kuqoqosho olusakhulayo, ukwamkelwa kwezo zongezo kunokwenzeka ukuba kukhule kwixesha elizayo.
1. Ukuphehlelelwa kweenoveli zeemveliso ngabadlali abaphambili kunokubonisa amathuba okukhula anengeniso
Abadlali abaphambili bagxile kuphando kunye nemisebenzi yophuhliso, ukuze kuqaliswe iimveliso zenoveli. Umzekelo, ngoJulayi ka-2020, i-Elysium Health yaphehlelela isongezelelo sempilo yengqondo entsha, isibini sedosi ephezulu yeevithamini ze-B ezine-omega-3 ezenziwe ngokukodwa kwi-oyile yentlanzi.
2. Ukwamkelwa kwezicwangciso ze-inorganic ngabadlali beemarike kunokubonelela ngamathuba amakhulu oshishino kwixesha elizayo elikufutshane
Abadlali abakhulu bezentengiso babandakanyeka kwizicwangciso ezahlukeneyo ze-inorganic ezifana nentsebenziswano kunye nentsebenziswano, ukuze kuphuculwe ubukho bentengiso kwaye bafumane inzuzo yokukhuphisana. Umzekelo, ngoMatshi ka-2021, uNeuriva ubambisene noMayim Bialik ukufundisa kunye nokuxhobisa abathengi kwimpilo yengqondo.
1. Izongezo zoKwandiswa kweMemori ziqhubeleka kwimfuno enkulu
Phakathi kwezicelo, uphuculo lwenkumbulo lolunye lweendidi ezinkulu kwizongezo zempilo yobuchopho. Ukonyuka kweenkxalabo malunga nesifo sengqondo esixhalabisayo phakathi kwabantu abadala kunyuse imfuno yeemveliso zokuphucula inkumbulo kwihlabathi liphela. Ngokutsho koMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO), ngo-2021, bekukho malunga ne-55 yezigidi zabantu abaphila nesifo sengqondo esixhalabisayo kwihlabathi liphela benamatyala amalunga nezigidi ezili-10 minyaka le. Ezinye zeemveliso eziqhelekileyo zokuphucula inkumbulo kwimarike ziquka iti eluhlaza, i-omega-3, ingcambu yeginseng, i-turmeric, kunye ne-bacopa.
2. Iindlela zoMntla Melika
Phakathi kwemimandla, uMntla Merika kulindeleke ukuba ubonise ukukhula okubonakalayo kwimakethi yezempilo yengqondo yehlabathi ngexesha loqikelelo. Oku kungenxa yokwanda kwamanani abantu abadala kunye nokuxhaphaka okuphezulu kokuphazamiseka kwengqondo kulo mmandla wonke. Ngokutsho kweAnxiety and Depression Association of America (ADAA), ukuphazamiseka kokuxhalaba sesona sigulo sengqondo sixhaphakileyo e-US, esichaphazela malunga ne-40 yezigidi zabantu abadala kwilizwe. Ngaphaya koko, ubukho beziseko zoncedo lwezempilo kulindeleke ukuba konyuse ukukhula kwemarike yengingqi kwixesha elizayo.
Iinkampani eziphambili ezibandakanyekayo kwimakethi yezongezo zempilo yengqondo yehlabathi yiAlternaScript, LLC, Accelerated Intelligence Inc., Liquid Health, Inc., HVMN Inc., Natural Factors Nutritional Products Ltd., KeyView Labs, Inc., Onnit Labs, LLC, Purelife Bioscience. Co., Ltd., Quincy Bioscience, Impumelelo yeCerebral, Amway, Puori, Health Ocean, kunye neSchiff.
Umzekelo, ngo-Epreli ka-2021, i-Unilever plc, inkampani yempahla yabathengi esekwe e-UK, yafumana i-Onnit, inkampani yezempilo esekwe e-US, edume ngemveliso yokongeza kwimpilo yengqondo yeAlpha Brain ukuze inkumbulo engcono, ukugxila, kunye nokusebenza kwengqondo.
• I-Herbal Extracts: Ginseng, Ginkgo Biloba, Curcumin, Lions Mane, Abanye.
• IiVithamini kunye neeMinerali: IVithamin B, iVithamin C & E, Ezinye.
• Iimolekyuli zeNdalo: i-Acetyl-L-Carnitine, i-Alpha GPC, i-Citicoline, i-Docosahexaenoic Acid (i-DHA), Ezinye izinto ezisetyenziswayo kunye nezinto ezichithwayo.
• NgeSicelo: Ukuphucula iMemori, iMood & Depression, iNgqwalasela kunye nokuGxininisa, ixesha elide kunye nokuchasana nokuguga, ukulala nokuBuyisa, kunye nokuxhalaba.
• NgeFomu yokongezelela: Iitafile, iiCapsules, nezinye.
• NgoMsebenzisi oQelekileyo weQela lobudala: iGeriatric, abadala, kunye noNyango lwaBantwana.
• Nge-Ditribution Channel: Geriatric, Adults, and Pediatrics.
IMarike yeHlabathi yezongezo zeMpilo yoBuchule, ngokweNgingqi:
• Amantla Emelika
-Kuyo yonke iYurophu
• I-Asia Pacific
-Yonke iAsia Pacific
• Ilatin America
-Indawo yonke yaseLatin America
• UMbindi Mpuma neAfrika
– Amazwe e-GCC
- Mzantsi Afrika
– KuMbindi Mpuma kunye neAfrika iphela